Barean’i Madagasikara Tapitra ny fiantsoana mpilalao vaovao
Hentitra ny fanapahan-kevitry ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Nicolas Dupuis, raha naneho hevitra momba ny fifantenana ireo mpilalao handrafitra farany ny Barean’i Madagasikara ny faran’ny herinandro teo.
Tsy mihoatra ny 23 isa izany ireo mpilalao ho any Egipta ary ireo nandray anjara tamin’ny fahatafitana hiatrika ny tompondakan’i Afrika na ny CAN 2019 ihany no hiarahany miasa aloha amin’ity. Tsy hanidy varavarana aho anefa, hoy hatrany i Nicolas Dupuis fa aleo aloha ho vita indray ny CAN. Efa volana mey isika izao ary amin’ny faran’ny volana no hosantarina ireo fanomanana rehetra ka aleo aloha hifantoka ireo efa eo. Ny 22 jona izao moa no hanomboka ny CAN izay hatao any Egipta.